EOS ayaa u oggolaanaysa in ay fuliyaan hawlaha sawir-qaadidda ee shabakada - Geofumadas
Juunyo, 2018 Cartografia, Geospatial - GIS
Inta badan hawlaha falanqaynta sawirada ee looga baahan yahay Erdas Imagine ama barnaamijka ENVI ayaa iminka ku jira online thanks to EOS Platform (EOS Platform). Adeeggan cusub ee casriga cusub ayaa bilowday EOS Data Analytics si xirfadlayaal GIS ah loo xaliyo raadinta, falanqeynta, kaydinta iyo muuqaalka tiro badan oo xogta juqraafiyeed.
Thanks to EOS Platform waxaad heli doontaa helitaanka nidaam deegaan oo ah afar waxyaalood oo EOS ah oo isku dhafan oo bixiya qalab aad u awood badan oo ah falanqeeyayaasha geospatial.
Xogta sawirada ayaa lagu kaydiyaa Kaydinta EOS ku salaysan dariiqa, waxaana loo heli karaa qaabaynta sawirka ama falanqaynta fogaanta wax-qabadka waqti kasta; Tani waxay noqon kartaa faylka isticmaalaha qaaska ah, sawir laga helay LandViewer ama feylka la soo saaro EOS Processing.
Waxaa jira ugu yaraan laba sababood sababta image processing waa hantida ugu weyn ee madal: baaraandegidda xaddi badan oo data waddaa online iyo kor u bixisaa si 16 workflows la sii badan dhaqsaha badan soo socda. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala waxay heli karaan sifooyinka kartida ugu fiican EOS Vision si loogu sawiro xogta vector iyo, sida lagu dhawaaqay mustaqbalka, falanqaynteeda.
Marka ay timaado xogta rasterized, waxaad ku shaqeyn kartaa noocyo kala duwan oo satellite-ka iyo datasets ee LandViewer, EOS Processing iyo EOS Storage. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala sidoo kale gali kartaa ay GeoTIFF u gaar ah, jpeg, files jpeg iyo codsan algorithms processing 2000 xogta GIS dhex API ama web interface ka. EOS Vision waa aalad hawlgallada xogta vectorized la taageero qaabab kala duwan (ESRI Shapefile, GeoJSON, KML, KMZ).
Qalabka dhamaystiran ee sawirka sawirka
EOS Processing waxay bixisaa waayo-aragnimo weyn oo ay processing aalada 16 ka mid ah jir caan qalab (isuga, reprojection, derivation), falanqaynta Satlaytaka fog, photogrammetry iyo algorithms ka fiirsato muuqaalada xiranayo in aan la heli karin meel kale. Diyaarso xogtaada falanqaynta imaatinka LiDAR iyo habka 3D maaddaama ay heli doonaan waqti gaaban.
hawlaha Preprocessing sida ogaanshaha daruur ama caawimo dhaqmaan radiometric aad kala miiri xogta sida xawliga ah u falanqaynta mustaqbalka: Waxaad sixi kartaa images ku xiran tahay saameynta Hawada iyo heerka dhabta ah ee dhalaalka ama reflectance ee ciidda.
Aqoonsiga walxaha, isbeddelka ogaanshaha iyo kala-saarista
The network neural convolutional, hore u sameeyey by EOS soo saaro muuqaalada image laguu ogolaado in aad si aad u codsato habab goynta-ku laayeen in lagu ogaado walxaha iyo raad isbedel ka bannaan.
Iyada oo ay ka muuqato sawirro badan oo isku-dhafan iyo is-beddelid shaqo-beddelid, waxaad baadhi kartaa sida dhir-beeleedyada sharci-darrada ah ay u socdaan waqti dambe.
Qaadista Edge waxay muujin kartaa xuduudaha dhabta ah ee dhulkaaga beeraha ilaa pixel-ta ugu dambaysa.
Waxaa suurtagal ah in la xisaabiyo baabuurta la dhigto ee xarumaha waaweyn ee dukaamada lagu iibsado algorithm baabuurta.
Sida ugu fiican ee falanqaynta ujeedada
waxyaabaha EOS Platform lihin ku dhawaad ​​dhamaan noocyada Satlaytaka fog iyo user ka dooran kartaa liiska dheer ee indices spectral si ay u xisaabiso on Daqsi. Waxa intaa dheer in la ballamay dhamaystiran oo indices Dhirta (NDVI, Reci, ARVI, SAVI, AVI, iwm), waxaa jira jirrabo in ay jeexaan xariiqda qaababka muuqaalka (biyo, baraf iyo barafka, NDWI, NDSI) iyo meelaha gubay (NBR ). Waxaa aad u fiican in ay xor u yahay inuu tijaabada ee guutooyinkiisa spectral oo abuuri kara isku caadadii of guutooyinkiisa oo ugu haboon baahidaada.
Kala habee oo falanqee
Xiriirka sahlan ee EOS Processing wuxuu fududeynayaa in la maareeyo habka shaqo-socodka shaqada iyadoo loo eegayo baahida ganacsi ee user. Waxaad samayn kartaa xuduudaha wax lagu shaqeynayo oo marar badan loo adeegsan karo hawlgalkan si loo yareeyo hawlaha falanqaynta ah ee farsamada. Soo cusbooneysiinta soo socota ayaa ku dari doona muuqaalka abuurista algorithms caadooyinka ka soo baxa hawlaha macluumaadka la heli karo.
Beeraha, dhirta, saliidda iyo gaasta iyo warshado badan
Tandem ee alaabta EOS waxay bixisaa xalka baahida loo qabo shakhsiyaadka, shirkadaha iyo ururada qaybo badan.
Iyada oo muujinaya caleenta dhirta iyo sifooyinka kala soocida dalagyada beeraha, Faytanku waxay si joogto ah ula socon karaan xaaladaha dalagga si loo ogaado cudurada dhirta, cayayaanka ama abaaraha. Khabiirada xayawaanka ayaa qiimeyn kara dhaawaca ay keeneen dabka, kormeerka xayawaanka ama xoojinta xaddidaadda.
EOS Platform waa door weyn oo loogu talagalay qorshaynta gobolka iyo degaanka, maaddaama ay ka caawineyso dadka isticmaala fasallada daboolka dhulka si ay u abuuraan khariidad daaqsimeed. Intaa waxaa dheer, waxaad samayn kartaa liis dhamaystiran ee qaababka magaalooyinka sida dhismayaasha, wadooyinka iyo waxyaabo kale oo muhiim ah gobolka.
Mashruucu wuxuu qaadi karaa maareynta musiibo adoo cabiraya heerka daadadka ama helitaanka xadka dabka. Marka la eego saliidda iyo gaasta, waxay awood u leedahay inay aqoonsadaan saldhigyada shidaalka iyo qiimeynta saameynta deegaanka.
EOS Data Analytics isticmaalaa daruur ku salaysan in uu la kulmo kala duwan toosan hal madal ah, la falanqayn cilmi ahaan la xaqiijiyey, adeegyo taageero iyo in la abuuro wax soo saarka in kordhin karo qiimaha si fog xogta Satlaytaka si ay u siiyaan natiijooyinka heerka khabiir-aad ganacsi.
Xakamaynta kartida buuxda ee xogta ilaalinta Earth ee EOS Platform, si toos ah oo loogu talagalay shabakadaada: https://eos.com/platform
Post Previous«Previous ARCADIA BIM - Altermativa Revit
Post Next Kuwa ku guuleysta abaalmarinta “Sannadka Kaabayaasha”Next »
Hal Jawaab u Jawaab "EOS waxay u oggolaaneysaa in ay fuliyaan hawlaha waxqabadka muuqaalka ee shabakada"
Macluumaadku waa mid waxtar leh! Waad ku mahadsan tahay